Amanethiwekhi Ukudweba Iwebhusayithi Ukukhipha Zonke Izixhumanisi Kusuka Ekhasini - Iseluleko Se-Semalt
Ukukhipha izixhumanisi kumakhasi wewebhu bekulokhu kunzima. Kuzodingeka ukopishe izixhumanisi ezifunayo ngamunye ngamunye, futhi kuyinto enesizotha futhi ethintekayo. Noma kunjalo, kunezinhlelo ezithile ezisekelwe kuwebhu ukukhipha zonke izixhumanisi kusuka kumawebhusayithi wakho afisa namabhulogi ngaphandle kokukhishwa. Ingxenye engcono kakhulu ukuthi lezi zinhlelo zingahlanganiswa neziphequluli zakho ze-IE, Firefox, Chrome, ne-Safari.
I-IWebTool Link Extractor yisofthiwe esithandwayo esekelwe kuwebhu nesandiso se-Firefox - space allocated. Izosiza ukulanda idatha yakho ngqo emshinini wakho. Once efakwe futhi kusebenze, lolu hlelo luzokwenza inqubo yokuklabalaza lula futhi kuphazamise. Ukukhipha idatha kusuka ezitolo zezindaba, ama-portals wokuhamba kanye nezindawo zokushintshaniswa kwamasheya akuzange kube lula. Ngeli software, ungenza imisebenzi eminingi ngaphandle kokukhishwa. Ivumela izicelo ezinhlanu kuphela ngehora futhi ithuluzi liyaziwa ukusebenza kahle. Ezinye zezinketho zayo ezivelele ziyi-Title kanye ne-anchor text inkinobho nokukhethwa kwe-Google Page-Rank.
2. Xhumanisa umcwaningi:
3. Umbiko we-FireLink:
Akuyona kuphela into engeke i-Firefox kuphela kodwa futhi uhlelo oluhle kakhulu lwe-web. Ihlunga izixhumanisi iphinde ikhiphe idatha yakho kusuka kumasayithi wezindaba, ukuphakelayo kwe-RSS, amabhulogu kanye namaphrofayela wezokuxhumana wezenhlalo ngaphandle kokukhishwa. Inikeza okukhethwa kukho ukuhlunga idatha ngokusekelwe ezintweni zayo nezidingo zakho. Umbiko we-FireLink usebenza ngokuskena izixhumanisi nokubuyekeza ama-dataset.
4. Ukwedlulisa i-SEM Isixhumanisi:
I-Extractor Link ye-SEM iphinde idume ngokuhlanganiswa kwayo kokuxhumanisa kanye nezakhiwo ze-web scraping. Kuyinto yezinhlelo ezilula futhi ezinhle kakhulu ukukhipha zonke izixhumanisi kusuka ekhasini lewebhu. Ideshibhodi yayo ebonakalayo izokwenza inqubo yakho yokukhipha ibe lula futhi ilula. Kungakhathaliseki ukuthi ufuna ukukhipha idatha kusuka kuzixhumanisi ezilula noma ukufeza amaphrojekthi okuthwebula idatha okuyinkimbinkimbi, lolu hlelo luzokwenza konke kuwe ngaphandle kwenkinga.
5. Ukwedlulisa i-SEOquake Link Extractor:
Isikhombi soxhumanisi se-SEOquake yisinye isicelo esisekelwe kuwebhu. Akudingi ukulanda, futhi ungazuza kuyo ku-intanethi. Ikusiza ukhiphe zonke izixhumanisi kusuka kukhasi elithile lewebhu bese uphahla bese ulandela idatha yesikhathi sangempela. Lokhu kuzobonisa ingcebo yezixhumanisi ngendlela yamawebhu wewebhu we-Google namakhasi amabhukumaka.
6. I-OutWit Hub Link Isibambisi: